Ezintathu Card Poker elihle kakhulu Real Real Casinos Online - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » Ezintathu Card Poker
Uma udlala i-Three Card Poker ngemali yangempela
Kuyini i-Three Card Poker?
Imithetho Eyisisekelo ye-Three Card Poker
Isu Eliyisisekelo Le-Three Card Poker
Umlando we-Three Card Poker
Dlala i-Three Card Poker
Uma kukhulunywa ngokugembula, umdlali ngamunye unamaqhinga akhe nobuso be-poker. Kodwa-ke, wonke umuntu uyanxuswa ukuthi athobele le mithetho elandelayo ukuqinisekisa ukuthi i-gameplay efanele iyagcinwa: ungasebenzisi ngokweqile, unqume ukuthi ufuna ukwenzani ngokuwina kwakho ngaphambi kwesikhathi, futhi ungalokothi udlale lapho udakiwe.
Ukwakha isabelomali kuyisenzo esinengqondo lapho ugembula ngemali yangempela. Okubaluleke ngokulinganayo ukusungula umgomo wokuwina. Lapho umdlali ebeka umbono wakhe kumklomelo wokuwina, kuba kuhle ekusebenziseni imali okunengqondo. Ekugcineni, ukugembula uphuzile akululeki kahle. Akukona nje kuphela ukuthi ukuphuza kuphazamisa izinzwa, kepha kukhuthaza nokwenza izinqumo ezimbi.
Kuyajabulisa, kuyashesha futhi kulula ukufunda, i-Three-Card Poker ibe ngomunye wemidlalo eshisa kakhulu yokugembula. Ekhasino yasendaweni naku-inthanethi, abashayayo benyukela etafuleni ngobuningi babo. Manje ngenketho ebukhoma, abadlali bangaphonsela inselelo umthengisi ngokulungiselelwa okuyiqiniso kusuka ekunethezekeni kwamakhaya abo.
Njengoba igama liphakamisa, inhloso yomdlalo ukwenza i-poker hand engcono kakhulu ngamakhadi amathathu nje. Ngokuphambuka kokuhlukahluka kwe-poker yendabuko, umbheja udlala kuphela ngokumelene nomthengisi. Ngokusetha kwayo okulula, umdlalo ungajatshulelwa yibo bobabili abafikayo nabadlali abanolwazi abanamasu ayinkimbinkimbi.
Ulungele ukudlala? Izinto zokuqala kuqala. Ukuqala, umdlali wenza i-ante ngaphambi kokuba umthengisi anikeze amakhadi amathathu kuwo wonke umuntu, kufaka phakathi yena. Okulandelayo, isinqumo sithathwa ukuthi sigoqwa noma sikhuliswa. Umthengisi bese eveza amakhadi akhe futhi kufanele akhiqize indlovukazi ephakeme noma engcono ukuze afaneleke.
Uma kufanelekile, izandla ziyaqhathaniswa futhi inhlanganisela enhle iyanqoba. Kulula kanjalo. Enye yezinto ezinhle mayelana ne-Three Card Poker ukuthi ungafanelekela ukukhokhelwa okungeziwe noma ngabe umthengisi eshaya isandla sakho, ngokwesibonelo, uzothola ibhonasi ye-ante uma uphiwe iqonde noma ngaphezulu.
Ngenkathi lo mdlalo osheshayo ungadlalwa ngama-novices kalula, izinga lekhono elidingekayo kuzo zonke izinhlobo ze-poker lenza livulekele amasu athuthuke kakhulu. Kwabaqalayo, okokuqala qiniseka ukuthi ujwayelene nokubili nokubheja kanye nokubheja, njengoba ukwahluka ngakunye kudinga indlela yaso ehlukile.
Umthetho ojwayelekile wesithupha owudlalayo uma unamabhangqa, amathathu ohlobo, aqonde noma aflaya. Ukwehluleka lokho, kufanele futhi uqhubeke uma ubamba indlovukazi, 6, 4 noma okungcono, inhlanganisela efakazelwe ngokwezibalo ukuthi inika ithuba elihle lokuwina iThree-Card Poker ngokungaguquguquki.
Njengoba idlalwe ngezindlela ezahlukahlukene amakhulu eminyaka, i-poker ingumpetha wokuvuselelwa. Isitayela seKhadi ezintathu ngumuntu osanda kufika endaweni yesehlakalo, kucatshangwa ukuthi ususelwe kumdlalo wakudala waseBrithani we-Brag. U-Poker ace Derek Webb ubizwa ngokuthi wethula inguqulo yamanje eLas Vegas maphakathi nama-90s.
Njengasemidlalweni eminingi yetafula ethandwayo, iThree Card Poker yadalulwa kubantu abaningi ngokuqhuma kwamakhasino aku-inthanethi. Kusukela lapho, umdlalo uchume futhi wavela, waveza ukwehluka okuthokozisayo njengeFlash Three-Card Poker kanye ne-Six-Card Bonus, konke okungathokozelwa bukhoma ezinhlakeni ezahlukahlukene.
Ukukhuphukela etafuleni kulula nakwi-inthanethi njengoba abashayayo banenketho engapheli yezingosi zokubheja abanazo. Ukudlala bukhoma i-Three-Card Poker ulwa nomthengisi wempilo yangempela- okusakazwa usuka estudiyo noma ekhasino- kunezela into eyengeziwe yenjabulo eye yafaka ukugembula okuku-inthanethi ezingeni eliphakeme.